यसकारण नेकपाका दुवै समूहले पाएनन् मान्यता, अब के फेरि एकता होला त ? - DonNepal
यसकारण नेकपाका दुवै समूहले पाएनन् मान्यता, अब के फेरि एकता होला त ?
१२ माघ २०७७, सोमबार २२:५८ DON	0 Comments
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले साविककै विवरण कायम हुने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो। ओली समूह र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै मागदाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ।
← प्रचण्ड र नारायणकाजीबीच किन बिग्रियो सम्बन्ध ? मंच मै भनाभन
आजदेखि स्वस्थानी व्रत सुरू, यस वर्ष शालीनदी मेलामा नयाँ नियम →
विवाह पञ्चमी महोत्सव : स्वयम्वर सम्पन्न, राती वैवाहिक कार्यक्रम
४ पुष २०७७, शनिबार ११:०९ DON	0
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार २०:१९ DON	0
‘संसद विघटन भएको होइन प्रचण्ड र माधव नेपालको सत्तामा पुग्ने लोभ विघटन भएको हो’ : मन्त्री अर्याल
४ माघ २०७७, आईतवार ०८:१५ DON	0